बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् - KlipMandu
मन मनमा सोच आयो गरिब दुखीलाई त छोरी पाए नि गार्हाे रहेछ छोरी पनि दिनु छ दाईजो नभई हुन्न भन्छन कति मानिस त जन्तीलाई सेवा पनि गर्ने पर्याे ।
कस्को बिहेमा कति दक्षिणा दिए भन्नेहरु पनि हुन्छन् । न त त्यो साडी दिएर कसैले लाउने हुन उल्टै कुरा गर्छन फलनाको बिहेमा त्यस्तो साडी दिएका बिचरा दिने मान्छेले पनि के गरून् , कति दिउन त ।
उनलाई टाईम लाग्ला भनेर म कोठामा गएर छिटो छिटो लुगा फेरे र उनलाई लुगा चेन्ज गर्न भनेर कोठा देखाईदिए ।
दिदी उनी सँगै भित्र पस्नु भयो सायद उनलाई हेल्प गर्ने होला । कपडा चेन्ज गरेपछि दिदीले मलाई बोलाउनु भयो आजको दिन बुहारीको साथमै बसिराख भित्रै बसे हुन्छ हेर्न आउने भित्रै आउछन् भन्दै दिदी बाहिर निस्कनु भयो । मान्छेहरुको आवतजवात चलेकै थियो । मलाई भने मान्छेहरु कति बेला जालान जस्तो भई रह्यो ।
उनी खुब आतिएकी थिईन् उनको त्यो भनाईमा नै पुर्ण रुपले माया भरिएर आएको थियो । मैले उनलाई जर्वजस्ति गर्न चाहिन उनले माया र खुसीले सुमपिएको शरीर पो मेरो लागि हक लाग्यो । जब उनी बहिसकार गर्छिन् त जर्वजस्ती गर्नु त्यो बलात्कार हो ।
मैले उनको मन दुखाउन चाहिन, तिमी सुत मलाई केही भएको छैन भनेर उनको केश मुसारे, उनी ओके गुडनाईट भनी सुतिन म पनि सुते । – अमेरिकानेपालबाट
← करोड क्लबमा ‘फाटेको जुत्ता.
नायिका सुष्मा कार्कीको दावीः ५ मिनेटको ३ लाख ! कोही छ तिर्न सक्ने ? →